सम्भो’गपछि बाथरुम छिरेर किन रुन्छन महिलाहरु ? पत्ता लाग्यो कारण, पुरुषहरुले थाहा पाउनुपर्ने – Hamro Nepali Samachar
Home/ रोचक/सम्भो’गपछि बाथरुम छिरेर किन रुन्छन महिलाहरु ? पत्ता लाग्यो कारण, पुरुषहरुले थाहा पाउनुपर्ने
एजेन्सी । भनिन्छ : मानव जीवनलाई सफल बनाउनका लागि चाहिने आधारहरु मध्ये यौ’न पनि एक हो । यौ’न मानव जीवनको एक नियमित प्रकृया भएका कारण यो कुनै जटिल वा फराकिलो विषय होइन, जति आम मानिसले यसलाई कठोर सम्झि’रहेका छन् ।
यौ’नलाई मानिसले जति अप्ठेरो रुपमा सोच्दै जान्छ त्यो उतिनै अप्ठेरो मोडतर्फ प्रवेश गर्छ । यद्यपी यौ’नसम्पर्क गर्नु अघि वा पछिका लागि आफ्नै अनुशासन पनि हुने गर्छन् । यौ;नलाई धेरै नै सहज ठा’नेर आचरणहीन उच्श्रृङखल बनाउन थालियो भने यसले फेरि जीव’नमा अर्को जटिलता सिर्जना गर्न पुग्छ ।
यौ’न सन्तोत्पादन गर्ने प्रकृयामात्र नभएर शा;रिरीक तथा मानसिक खुसी दिलाउने एक बलियो सम्बन्ध पनि हो । त्यस कारण पनि यसले मानव स्वा’स्थ्यलाई फाइदा नै पुग्ने गर्छ । तर आजहामी एउटा नयाँ वि’षयमा चर्चा गर्दै छौं ।
यौ’नपछि आफ्नो महिला पार्टनको निधार चुम्ने, सुम्सुम्याउने र अंगालोमा राखेर मिठा मिठा कुरा गर्नुभयो भने उनीहरु खुसि हुन्छन । महिलाहरु पुरुषको तुलानाका ज्यादै भावानात्कम र समावेदनशिल हुने भएका कारण यी कुराहरुको ख्याल पुरुष पा’र्टनरले राख्न आवश्यक ठानिन्छ ।